ဟယ်ရီပေါ်တာနင်္ဂနွေပိတ်ရက်များတွင်ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့သည်အကောင်းဆုံးနေရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဟယ်ရီပေါ်တာနင်္ဂနွေပိတ်ရက်များတွင်ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့သည်အကောင်းဆုံးနေရာများ
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 01/01/2021)
ဟယ်ရီပေါ်တာဇာတ်ကားအားလုံးအချိန်အအောင်မြင်ဆုံးရုပ်ရှင်စီးရီးခဲ့ကြသည်. အဆိုပါဟယ်ရီပေါ်တာဇာတ်ကားကနေမြင်ကွင်းများအတော်များများဟာလန်ဒန်သူ့ဟာသူအတွင်းသေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြ. Whether you areadie-hard fan of the Harry Potter movie or book series, လန်ဒန်ခြောအနေနဲ့စစ်မှန်ဟယ်ရီပေါ်တာအတွေ့အကြုံအတွက်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပါသည်. အဘယ်အရာကိုသိခငျြ5ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ရှိသင့်ဟယ်ရီပေါ်တာနင်္ဂနွေပိတ်ရက်များအတွက်အလည်အပတ်ခရီးနေရာ? ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားသင့်ရဲ့ Wizard စွန့်စားမှုတစ်ရပ်ပိုမိုလွယ်ကူနှင့်ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာတစျခုပါစေရန်ဤစာရင်းပြုစုထားပါတယ်!
1. ဟယ်ရီပေါ်တာနင်္ဂနွေပိတ်ရက်: Warner Bros Studios ကလှည့်လည်လန်ဒန်
ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာအန္တိမအတွေ့အကြုံ! အဆိုပါအစုံပထမဦးဆုံးလက်ကိုကြည့်ပါ, ဝတ်စုံ, နှင့်ကျားကန်အပေါငျးတို့သဟယ်ရီပေါ်တာဇာတ်ကားများတွင်အသုံးပြု! ရုပ်ရှင်အပါအဝင်များ၏တည်နေရာများကိုအချို့အတွင်းမှအဆင့်; မဟာခန်းမ, Dumbledore office, and Hagrid hut.
အဘယ်မှာရှိဒီကိုရှာဖွေ? အဆိုပါ Warner Bros ကူးအပေါ်ခေါင်းကို. စတူဒီယိုခရီးစဉ်လန်ဒန်. ဟယ်ရီပေါ်တာ၏လုပ်ခြင်းအရှေ့တောင်အင်္ဂလန်မှာ Leavesden အတွက်အများပြည်သူဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်. Not to be confused with the Wizarding World of Harry Potter of Universal Studios theme parks. ဒါဟာဟယ်ရီပေါ်တာရုပ်ရှင်ကားတစ်ဦးစစ်မှန်သည့်နောက်ကွယ်မှတစေ့တစောင်းရာပူဇော်သက္ကာကိုတစ်ဦးအမြဲတမ်းပြပွဲဖြစ်ပါသည်. Warner Bros မှာဟယ်ရီပေါ်တာဇာတ်ကားတစ်နောက်ကွယ်မှခရီးစဉ်နဲ့မှော်နေ့ကထုတ်ဖူး. စတူဒီယိုခရီးစဉ်လန်ဒန်.
2. ဟယ်ရီပေါ်တာနင်္ဂနွေပိတ်ရက်: တချို့ကကုန်သည်မှာပလက်ဖောင်းဖမ်းပြီး93/4
ဓမ္မရာဇဝင်လက်ဝါးကပ်တိုင်ဘူတာသည်, ဒါပေါ့, Hogwarts စုန်းအတတ်၏ကျောင်းနှင့် wizardry ၏ကျောင်းသားများအတွက်များအတွက်ထွက်ခွာအမှတ်, ၎င်း၏အကျော်ကြားဆုံးကျောင်းသားရာ, ဟယ်ရီပေါ်တာ, တက်ရောက်သူ. ပလက်ဖောင်းကနေ Hogwarts Express ကိုထွက်ခွာ9¾.
ဓမ္မရာဇဝင်လက်ဝါးကပ်တိုင်ဘူတာအတွင်း, အဓိက ဘူတာရုံ Edinburgh နှင့်စကော့တလန်မှရထားများအတွက်လန်ဒန်မြို့ရှိ, တစ်ဦး ခရီးသွားဧည့်ဆွဲဆောင်မှု စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, နှင့် အိတ်ပုံဖမ်းတွန်းလှည်း မြို့ရိုးကို embedded ထက်ဝက်, ဘယ်မှာသင် re-ပြဋ္ဌာန်းသင့်ကိုယ်ပိုင်ဟယ်ရီပေါ်တာယခုအချိန်တွင်နိုင်.
လူမျိုး၏စီတန်းနှင့်အတူပိတ်ဆို့မှုကိုကယ်ဖို့, ဒီဓမ္မရာဇဝင်လက်ဝါးကပ်တိုင်ဘူတာရုံ၏အဓိကခန်းမဧရိယာမှာတွေ့ရှိခံရဖို့ယခု, မရပလက်ဖောင်းများအကြား9နှင့် 10 သင်ထင်လိမ့်မယ်အဖြစ်.
Between the hours of9am and9သင်တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံဆရာနဲ့သငျသညျအကောငျးဆုံးဓါတ်ပုံကိုရထားတဲ့လက်ထောက်အကူအညီနဲ့ရှိသည်ဖို့ပေးဆောင်နိုင်ပါတယ်ညနေ, complete withaHarry Potter scarf and/ or wand. သင်ဆဲအခမဲ့အဘို့ဤအရပ်၌သင့်ကိုယ်ပိုင်ဓါတ်ပုံကိုယူနိုင်ပါသည်.
သင်သာအထွတ်အထိပ်ကာလအတွင်းမှာသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အပိုငွေရှိနိုင်လျှင်, you may wish to consider purchasingaVIP Photo Pass lanyard. ဒါကပလက်ဖောင်းများပါဝင်သည်9¾ lanyard, your photograph, and queue jump, အားလုံး£ 20.
အဆိုပါဘူတာရုံယခုနေအိမ်ပလက်ဖောင်းအမည်ရှိဟယ်ရီပေါ်တာဆိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်93/4 သင်သည်သင်၏ Wizard ဥစ္စာရှိသမျှတို့ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာ. သင်ပင် 15 ပင် 65 £များအတွက်ကိုယ်ပိုင် Hogwarts စည်£များအတွက်ဒီမှာကိုယ်ပိုင် Hogwarts စာတစ်စောင်ဝယ်နိုင်!
3. Stay: အဆိုပါ Wizard ကိုကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာအဆိုပါဂျြောဂြီယနျအိမ်ဟိုတယ်
တစ်ခုချင်းစီကိုအခန်းတစ်ခန်းစွန်းဖန်ပြတင်းပေါက်တပ်ဆင်ထား, ကြောကျခဲနံရံများ, လေးယောက်ပိုစတာကုတင်, သစ်သားမီးဖိုကိုမီးရှို့နေစဉ်, အိုးကင်း, နှင့်ရောင်စုံဒီလန်ဒန်ဟိုတယ်မှာဝိဇ္ဇာအတတ်အားရုပ်ပုံဖြည့်စွက်. ဒါဟာသင်မှော်ခံစားရစေရန်အာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်.
4. ဟယ်ရီပေါ်တာနင်္ဂနွေပိတ်ရက်: အဆိုပါအိုးကင်းမှာတစ်ဦးကသောက်ဖူး
တစ်အိုးကင်းကြိုးစားနေခြင်းမရှိဘဲလန်ဒန်မြို့ရှိတစ်ဦးဟယ်ရီပေါ်တာနင်္ဂနွေပိတ်ရက်ဆိုတာဘာလဲ? ဤသည်မှော်ကော့တေး, အတွေ့အကြုံများတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် 1 နာရီ 45 အတွက် MIN စွဲငြိဖွယ်ရာလူတန်းစား လန်ဒန်. သင့်ရဲ့သင်္ကန်း Don, grab your wands, and get ready for your most spirited Potions class yet, အဆိုပါအိုးကင်းမှာနှစ်ဦးအဘို့ဤဗတ္တိဇံမှော်ကော့တေး, အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူ, လန်ဒန်.
သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုအလုပ်ဘူတာရုံမှာ, သင့်ရဲ့ပဉ္စလက်တစ်ကြိုဆိုသောက်လောင်းခြင်းဖြင့် Wand ထဲကသင်တို့အားစမ်းသပ်ရဦးမည်. သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်၏အအရသာ Elixir စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်ကိုအထူးမော်လီကျူး mixology ကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံးပါလိမ့်မယ်, ကွဲပြားခြားနားသောစရိုက်များနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးချင်းစီ၏. လန်ဒန်ရဲ့အများဆုံး enchanting ကော့တေးအတှေ့အကွုံမှာအချို့မှော်ထရောမွှေဖို့အဆင်သင့် Get!
1 နာရီ 45 အဆိုပါအိုးကင်းမှာနှစ်ယောက်မိနစ်စွဲငြိဖွယ်ရာမှော်ကော့တေးအတှေ့အကွုံ, လန်ဒန်
ထောက်ပံ့ Magic Wand နဲ့သင်္ကန်းအလုပ်လုပ်ကိုင်
မော်လီကျူး mixology သုံးပြီးသုံးအချိုရည် Create
အရက်-အခမဲ့, gluten, and vegan options all available
ကိုယ်ပိုင်ဘောက်ချာများနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုကဒ်အပါအဝင်အတွေ့အကြုံကိုဆုကြေးဇူးကို pack ကို
den Helder လန်ဒန်ရထားမှ
5. အဆိုပါစာအုပ်များနှင့်တစ်ဦးက Muggle တွင်, Movies မှစ. မျက်မှောက်လှည့်လည်လမ်းလျှောက်ကြည့်ရှုပါ
အဆိုပါ 2.5 တစ်နာရီ Muggle လမ်းလျှောက်လှည့်လည်သည့်စာအုပ်တွေထဲမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့လန်ဒန်အထင်ကရအဆောက်အအများအပြားဖုံးလွှမ်း, နံပါတ်အပါအဝင် 12 Grimmauld ရာဌာနနှင့်မှော်ဝန်ကြီးဌာန. သင်တို့သည်လည်းဤကဲ့သို့သောအဖြစ်စီးရီးနေရာများအများအပြားများအတွက်လှုံ့ဆော်မှုခဲ့လမ်းများနှင့်လမ်းကြားသို့သွားရောက်ပါလိမ့်မယ်; ထောင့်ဖြတ် Alley နှင့် Knockturn Alley. သို့သျောလညျး, ကြှနျုပျတို့သညျဤခရီးစဉ်ပဲတတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့မဟုတ်ဘယ်လောက်ချစ်ကြ. ဒါဟာအစအချို့သို့ထိုးထွင်းသိမြင်ထောက်ပံ့ သမိုင်းဆိုင်ရာက်ဘ်ဆိုက်များ သငျသညျလမ်းတစ်လျှောက်ဖြတ်သန်းပါလိမ့်မယ်.
ခံစားချက်သင်သည်လန်ဒန်တဝိုက်သင့်ကိုယ်ပိုင်မှော်ကိုဖန်တီးရန်မှုတ်သွင်း? ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းကိုသုံးပါ5ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ရှိသင့်ဟယ်ရီပေါ်တာနင်္ဂနွေပိတ်ရက်များအတွက်အလည်အပတ်ခရီးနေရာ, ယခု. စာအုပ်၏လက်မှတ်အတွက်မိနစ်အကူအညီဖြင့်များ တစ်ဦးကရထား Save!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 သင့်ရဲ့ဟယ်ရီပေါ်တာနင်္ဂနွေပိတ်ရက်များတွင်ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့သည်လည်ပတ်စေရန်အရပ်တို့ကို” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fharry-potter-weekend-london%2F– (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, သငျတို့သက de နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများမှ / fr အဆိုပါ / zh-CN ကိုပြောင်းလဲရန်သို့မဟုတ် / လို့ရပါတယ်.
#ဟယ်ရီပေါ်တာ စွန့်စားခန်း europetravel HarryPotterfilms လန်ဒန် ခရီးသွား wizard
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားဒိန်းမတ်, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား